CAJIIB: Mulkiilaha Kooxda Ugu Qanisan Adduunyadu Wuxuu Shan Jeer Ka Lacag Badan Yahay Mulkiilaha Chelsea Ee Roman Abramovich - Laacib
HomeWararka CiyaarahaCAJIIB: Mulkiilaha Kooxda Ugu Qanisan Adduunyadu Wuxuu Shan Jeer Ka Lacag Badan Yahay Mulkiilaha Chelsea Ee Roman Abramovich
CAJIIB: Mulkiilaha Kooxda Ugu Qanisan Adduunyadu Wuxuu Shan Jeer Ka Lacag Badan Yahay Mulkiilaha Chelsea Ee Roman Abramovich
Waa mulkiilaha kooxda kubadda cagta adduunyada ee ugu qanisan. Ma jiro qof hantidiisa oo kale haysta oo iska leh koox kubadda cagta, xataa Roman Abramovich oo Chelsea iska leh ayuu shan jibbaar ka lacag badan yahay.
Sannadkii tegay oo kaliya, lacagtiisa ayaa korodhay 130% (Boqol iyo soddon, boqolkiiba). Laakiin sidaas oo ay tahay kooxdiisu ma laha magaca weyn ee naadiyada adduunka, wayna adag tahay in la barto oo ay fagaareyaal waaweyn kasoo muuqato. Sababtu waxay tahay waddanka ay ka dhisan tahay oo aanay kubadda cagtu caan ka ahayn, kooxihiisuna aanay imanin fagaareyaasha waaweyn.
Mukesh Ambani oo u dhashay waddanka India, waa mulkiilaha naadiga Mumbai Indians ee ka dhisan caasimadda dalkaas, waxaana hantidiisa lagu qiyaasay £62 bilyan oo Gini.
Waa maalqabeenka toddobaad ee ugu taajisan adduunka oo dhan, balse sida hantidiisu u kobcayso, waxa la saadaalinayaa inuu sannadaha soo socda ka mid noqon doono kuwa ugu sarreeya oo uu gaadhi karo heer uu galo kaalinta koowaad.
Marka la eego hantidiisa, kooxada uu Mukesh iska leeyahay ee Mumbai ayaa noqonaysa naadiga ugu qanisan adduunyada, waxaana uu dhaafayaa Roman Abramovich oo Chelsea iska leh, Stan Kroenke oo ah mulkiilaha Arsenal iyo xataa Daniel Gilbert oo ah ninka iska leh kooxda NBA-da Maraykanka ee Cleveland Cavaliers.
Mumbai Indians waxay ku guuleysatay horyaalka waddanka India ee Premier League saddex ka mid ah afartii sannadood ee ugu dambeeyey.
Ambani oo iska leh shirkadda Reliance Industries Limited oo ka mid ah shirakdaha ugu waaweyn India iyo sidoo kale Antilia, waxa uu deggan yahay magaalada Mumbai.